WONDERFUL UNIVERSE: နှင်းခါးရိုက်တဲ့ ရင်ခွင်
နှင်းမှုန်တွေ တဖွဲဖွဲ ကျနေကြသည်လား။ သူမ တကိုယ်လုံး ခိုက်ခိုက်တုန်နေအောင် အေးစက်လို့ နေ၏။ဘေးဘီဝဲရာကို ဘာမှ မမြင်နိုင်လောက်အောင် တလောကလုံး ပကတိ အမှောင်တိုက် တစ်ခုလို။ ပါးပြင်ကို လာရောက်ပွတ်သပ်သော လက်တစုံကြောင့် သူမ နွေးကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ ဘာကိုမှ မမြင်ရ သော်လည်း ဒါဟာ မောင့်ရဲ့လက် ဆိုတာ သူမ သေချာလို့ နေခဲ့သည်။ မောင့်မျက်နှာကို မမြင်ရသော်လည်း မောင်သည် အခါများစွာကလို သူမမျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့်လို့ နေမည်လား။ သူမမျက်နှာကို ပွတ်သပ်လိုက်သော မောင့်လက်တွေက မြတ်နိုးကြင်နာမှုတွေ အပြည့်။ နောက်ပြီး သူမကို စိုက်ကြည့်တတ်သော မောင့်မျက်ဝန်းတွေကလဲ ချစ်ခြင်းတွေ အပြည့်အသိပ်နှင့်။ ထိုစဉ်အခါတိုင်း သူမ မှာ ရှိသမျှ သောကတွေ ပြေပျောက်ကာ ရင်ထဲ နွေးထွေး လှိုက်လှဲလာမြဲ။မောင့်လက်ကို ဖမ်းယူဆုပ်ကိုင်ပြီး ဖွဖွညင်သာ နမ်းလိုက်ရမလား သူမ တွေဝေ နေမိစဉ်မှာပဲ ထိုလက်တစုံက သူမကို သိုင်းဖက်လို့လာသည်။ သူမကျောပြင်ကို ထိတွေ့လာသော မောင့်လက်တွေက အေးစက် လွန်းလှသည်ထင့်။ သူမကိုယ်လေး တုန်သွားရပြန်သည်။ မောင့်ရင်ခွင်မှာ နွဲ့မှီလိုက်လျင်တော့ နွေးထွေး လေမလား။ သို့သော် သူမ မောင့်ရင်ခွင်ကို ရှာဖွေလို့မရ။ ဟိုးအဝေးကြီးမှာလို ဘာကြောင့် ခံစား နေရသည်လဲ။ သိုင်းဖက်လာသော မောင့်လက်တွေက တင်းကျပ်သည်ထက် တင်းကျပ်လာသည်။ သူမ အသက်ရှူရ ခက်ခဲလာ၏။ သူမ နှလုံးအိမ်တွေ ပေါက်ကွဲထွက်မတတ် မွန်းကျပ်လာတော့ မောင့်လက်တွေထဲက လွတ်အောင် ရုန်းကန်မိတော့သည်။ဗြုန်းကနဲ အိပ်မက်က လန့်နိုးလာတော့ ဟိုးအဝေးက ပြေးလာရသူလို သူမ မောပန်းနွမ်းလျလို့ နေခဲ့သည်။ ညဉ့်ငှက်တို့၏ အော်သံကို တချက်တချက် ကြားနေရ၏။ ဖွင့်ထားသော ပြူတင်းတံခါးမှ တိုးဝှေ့ဝင်လာနေသော လေက အေးလွန်းလှသည်။ ပြူတင်းတံခါးကို ထပိတ်လိုက်ရင်း လူက မောလျလာသောကြောင့် ပြူတင်းတံခါးဘောင်ပေါ် မှေးမှီလိုက်ရသည်။ သူမပါးပြင်တွေ စိုစွတ်လို့ လာပြန်ပြီ။ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ ဆုံတွေ့ခြင်း တွေကိုမှ သူမက ဘာလို့ မျှော်လင့် နေမိသည်လဲကွယ်။ သူမ မောင့်ကို ဒီတသက်လုံး မမေ့နိုင်တော့ဘူး ထင်ရဲ့။ စိတ်မှာ မေ့ထားပေမဲ့အိပ်မက်က အတိတ်ကို ပြန်ပြန်ဖတ်တော့ခပ်ဖျော့ဖျော့ မျှော်လင့်ချက်တချို့တောင်ရိပ်ယောင်ပြောင်း ဒဏ်ရာတွေအဖြစ်ငါ့ညတွေကို ကုတ်ခြစ်လို့။တကယ်ဆို သူမက မောင့်ကို မေ့နိုင်အောင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီပဲ။ သူမ ပျော့ညံ့ တွေဝေနေလို့ မဖြစ်ပါ။ နောင်တတွေလဲ မရခဲ့ပါ။ သူမရင်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ နာကျင်ရပါစေ။ သူမ ရွေးချယ်သောလမ်းကို သူမ ဖြောင့်ဖြောင့်သွားနိုင်ရပါလိမ့်မည်။ သူမကိုယ်တ်ိုင် သူမ၏ နှလုံးသားကို ဖယ်ထုတ်ခဲ့ ပြီးပြီပဲ မဟုတ်လား။ အခုလို မောင့်ကို မွတ်သိပ်စွာ ခြောက်လှန့် တတ်သော အိပ်မက်များ ကိုတော့ သူမ ခံနိုင်ရည် ရှိအောင် ကြိုးစားဖို့ လိုအပ် နေပါသေးသည်။ တစ်နေ့နေ့မှာတော့ သူမကို အိပ်ပျက်စေသော ထိုအိမ်မက်တို့ သူမထံ ရောက်မလာ နိုင်တော့ဘူးဟု သူမ မျှော်လင့် နေမိပါသည်။ဓာတ်ပုံလေးကို ဒီက ယူထားတာပါ။ရေးသားသူ - တွယ်တာ
ကိုယ်လည်းမိုးကုတ်မှာမွေးတာ။ သူငယ်တန်းမှ ရန်ကုန်ရောက်တာ.အောင်ချမ်းသာဘုရားကြီးတို့၊ ကန်သုံးလုံးတို့ သတိရမိတယ်
nice writings! it's exactly same as my story. the fact that i can never meet him again and still dreaming of him though i try to forget him. it's really tough!
အရေး အသား လေး က အရမ်းနူးညံတာဘဲ။နှလုံးသားလဲ နူးညံမှာ သေချာတယ်။ကံကောင်းပါစေနော်။
စနေသား၊ စနေဂြိုလ်နှင့် အလောင်းအစား
သူတို့ ပိုင်တဲ့ မြန်မာ့အမွေ
ဦးပုည ရဲ့ ကဗျာ တချို့
ကဆုန်လပြည့် နဲ့ အင်ကြင်းပန်း
လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး သင့်ကျန်းမာရေးကို မြန်မြန် တိ...